FIANGONANA ADVANTISTA : Natao ny alahady teo ny fandevenana ny pastera Herinirina Jasmin
Betsaka ireo nitsena ny razana teny Ambovondramanesy ny alahady maraina. 11 juin 2019
Avy eo dia nitanjozotra namonjy ny ‘Complexe sportif’ Ampisikina izay nanaovana ny fotoam-pivavahana sy nandraisana ny famangiana. Ny tolakandron’iny ihany dia napetraka eny amin’ny fasam-bahiny ao La corniche ny vatana mangatsiakan’ny pastera Herinirina Jasmine. Maro dia maro ireo tonga nanotrona ny fianakaviana sy nanao veloma farany azy ary nanatitra azy any amin’ny toerana iandrasany ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty. Ny 3 jona teo no nindaosin’ny fahafatesana ny pastera Herinirina Jasmin. Namela mananotena sy kamboty mianadahy izy.
Nianatra tao amin’ny kolejy advantista Soamanandrariny izy sy ny rahalahiny roa, dia Lyla Herimanitra sy Jania Herimamy. Ny rahalahiny farany moa dia tsy zoviana eto Mahajanga fa i Daddy na Heriniaina Tia izay tale jeneralin’ny fahitalavitra rahavavy RTN no sady efa PDSn’i Mahajanga ihany koa. Nanohy fianarana tany amin’ny seminera advantista Phoenix tao amin’ny nosy Maorisy izy ary nanambady an’i Margery, izay vehivavy teratany maorisianina. Tany Andapa sy Antalaha izy no niandraikitra ny fiangonana mialoha ny namaliany ny antson’ny « federation de Maurice ». Nifindra monina tany Grande Bretagne izy ireo nanohy ny fianarany. Voatendry ho filohan’ny misiona advantista tany Antsiranana indray izy ny taona 2005, ary niverina nipetraka sy nanohy ny asan’Andriamanitra teto Madagasikara.
Ny taona 2010 dia nofidian’ny SID na « Division de l’Afrique Australe et de l’ocean Indien » ho sekretera jeneralin’ ny « Union de l’ocean Indien » izy. Ny taona 2014 dia lasa « Union de fédération » ny « Union de l’Océan indien », na fiombonamben’ny fiangonana advantsita aty amin’ny Oseana indiana ka nofidiana ho filoha voalohan’ity rafitra ity izy. Na dia nanana olana ara-pahasalamana aza izy dia nanompo an’Andriamanitra sy ny fiangonany tamim-panetren-tena hatrany notohanan’ny andefimandriny.
Nanome voninahitra azy ireo mpiara-miasa aminy ao amin’io federasiona io, any Maurice sy Antananarivo, Mahajanga ary manerana an’i Madagasikara. Nanatrika izay koa ireo olom-panjakana miaramila sy sivily eto Mahajanga notarihin’ny sefo distrikan’i Mahajanga faharoa izay nitarika ny lanonana nanomezana ny nodimandry ny laharam-boninahitra ‘chevalier de l’ordre national’ narahin’ny mozika notsofin’ny miaramila. Tazana teny ihany koa ny ben’ny tanànan’i Mahajanga Andriantomanga Mokhtar izay nitondra delegasiona matanjaka avy amin’ny kaomina.